खोप के हो? यसले कसरी काम गर्छ? किन मानिस डराउँछन्? – Public Health Concern(PHC)
दशौँ शताब्दीमा चिनियाँहरूले पहिलो पटक एक प्रकारको खोप पत्ता लगाए। “भ्यारियोलेसन” भनिने प्रक्रियाअन्तर्गत स्वस्थ मानिसहरूलाई रोगले ग्रसित तन्तुको सम्पर्कमा ल्याइन्थ्यो ताकि उनीहरूमा प्रतिरोधी क्षमता जन्मियोस्।
गत शताब्दीमा खोपहरूका कारण थुप्रै रोगले पुर्‍याउने हानि निकै कम भयो।
सन् १९६८ मा त्यसको खोप विकास नहुन्जेल वार्षिक करिब २६ लाख मानिस दादुराका कारण मर्ने गर्थे।
केही दशकअघि मात्र पनि दशौँ लाखलाई सताएको पोलियोको सङ्क्रमणले प्यारालाइसिस वा मृत्युलाई निकै वास्तविक चिन्ता बनाइदिएको थियो।तर अहिले पोलियो लगभग निर्मूल भएको छ।
खोपको सुरुवातदेखि नै यसप्रतिको शङ्का कायम छ।
विगतमा मानिसहरू धार्मिक कारणले खोप प्रयोग गर्न अनकनाउँथे। किनभने त्यसले शरीर अपवित्र हुने वा त्यसले छनोटको स्वतन्त्रता हनन गर्ने ठानिन्थ्यो।
पछिल्लो समयमा खोपविरोधी आन्दोलनका एक मुख्य अभियानकर्मी एन्ड्र्यु वेकफिल्ड रहे।
सन् १९९८ मा ती लन्डनस्थित चिकित्सकले एमएमआर खोप र अटिज्मबीच सम्बन्ध रहेको गलत विवरण प्रकाशन गरे।
साथै खोपको विषयमा निकै राजनीतिकरण भयो।
इटलीका आन्तरिक मामिलामन्त्री माट्टियो साल्भिनी खोपविरोधी समूहका पक्षधर छन्।
उसले भनेको छ खोपले हरेक वर्ष संसारभरि २० देखि ३० लाख ज्यान जोगाउँदै आएको छ।
खोपका विरुद्ध सबैभन्दा ठूलो चुनौती तथा तिनको सबैभन्दा कम प्रयोग दर द्वन्द्व तथा कमजोर स्वास्थ्य उपचार प्रणाली उपलब्ध भएका देशहरूमा छ।
तर विकसित मुलुकहरूको हकमा घट्दै गएको गम्भीरतालाई डब्लुएचओले प्रमुख समस्या मानेको छ, अर्थात् मानिसहरूले ती रोगले कति हानि गर्न सक्छन् भन्ने बिर्सन थालेका छन्।बीबीसी नेपाली
Tags: child healthHistory Of VaccineImmunizationImmunization ScheduleKhop Sewa